Wasaaradda caafimaadka oo tababar u soo xirtay haween ka kala yimid gobollada dalka – idalenews.com
Wasaaradda caafimaadka oo tababar u soo xirtay haween ka kala yimid gobollada dalka
Wasaaradda adeegga bulshada iyo Hay’adda Caafimaadka adduunka ayaa maanta soo gabagabeyay Tababar ku saabsan daryeelka Caafimaadka Haweenka oo ay ka qeyb galeen dad ka kala yimid qaar ka mid ah gobollada dalka.
Siminaarkan ay manta soo gaba gabeysay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya iyo hay’adda WHO ayaa waxaa loo qabtay haweenka ka kala yimid Puntland, waqooyiga Soomaaliya iyo qeybo ka mid ah koofurta waxaana siminaarka uu ahaa mid looga magacdaray marwo caafimaad.
Dr Maxamed Maxamuud Fuji oo ah madax hay’adda WHO ee koofurta Soomaaliya oo hadal ka jeediyay xeritaanka siminaarka ayaa sheegay in u jeedka ay u qabteen uu ahaa sidii loo badbaadin lahaa haweenka iyo dhalaanka.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda adeegga bulshada xukuumadda Soomaaliya Maryam Qaasim Axmed ayaa tilmaamtay in haweenka Soomaaliyeed ay wax badan ka faa’ideen tababarka, waxa ayna intaasi ku dartay in wadamo badan oo caalamka ka mid ah uu ka dhaco si daryeel gooni ah loogu sameyo hooyada iyo dhalaanka.
Guddoomiyaha baarlamanka oo u dhoofay magaalada Addis Ababa
DAAWO SAWIRO ku saabsan Ciidamada Kenya oo lagu fidiyay Gabi ahaan Magaaladda Kismaay